Qaybta 1: Waa maxay Apple Beats Music Service?
Qeybta 2: Beats ku saabsan la Apple Music tagaa
Qeybta 3: Sidee u dhaqaaqo music Apple gabayo iyo playlists?
Apple garaaca music waa rukun ku salaysan adeegga geeyo music ama app oo waxaa iska leh Beats heerka elektaroonik ah ee Apple Inc. hore adeegga waxa loo yaqaan Music Beats oo la joojiyey markii Apple iibsaday Beats ee 2014 ayaa Macmiil oo ka mid ah macaamiisha jiray ayaa u guuray in mid cusub ka dib. Beats Music ka Apple waxay bixisaa users maktabadda ballaaran ka badan 20 milyan oo heeso oo la huleeshay ee ku salaysan baahida. Users sidoo kale karaa download music iyo kuwan raadkaygay u offline loo maqli karo.
Apple Beats adeeg music waa madal sare leh customizable halkaas oo dadka isticmaala ka heli kartaa talooyin ka khubaro ku saleysan caadooyin dhagaysiga iyo ka heli kartaa playlists curated aadanaha ka publications music iyo xirfadlayaasha sida Rap Radar, Rolling Stones iyo fargeeto beero iwm Kani waa adeeg lacag leh oo kharash $ 9.99 bil kasta iyo $ 99.99 halkii sanno. Waxaa diyaar u ah ma ahan oo keliya dadka isticmaala Apple iPod, laakiin sidoo kale on iPad, iPhone, Mac, PC. Waxaa kaloo laga heli karaa Android iyo Windows ka hawlgala nidaamyada iyo Sonos ayaa ku dhawaaqay in Beats Music noqon lahaa ugu dhakhsaha badan ay taageerto nidaamka Gudoomiyaha wireless ku bilaabay. Waxa kale oo fiican oo ku saabsan Apple Beats Music waa in ay sidoo kale bixisaa qorshaha qoyska tagged qiimo ah $14.99 kaas oo A.villa 6 dadka la wadaagi karto Times ay a.
Apple Beats Music yimid nool marka Apple iibsaday Beats Music Company ee 2014. Taas macnaheedu waa in dadka oo dhan, kuwaas oo heshiiska si Music Beats kuwa u leeyihiin in ay u gudbaan Apple Beats Music by samaynta kala-guurka ah. Iyada oo cusub app geeyo music Apple ee, nasiib darro, Beats uu leeyahay si ay u tagaan, laakiin taasi ka dhigan tahay ma aha in macaamiishu jira wajihi lahaa nooc kasta oo khasaare. Waxay awood u yeelan doonaan in ay sii xisaabaadkooda, maktabadda, playlists iyo xitaa magaca xisaabta marka ay u baddashaan app cusub. Apple Music la bilaabay on June 30 2015 iyo mahad update ah ee app Music dhaqdhaqaaqaa iPhone, iPad iyo iPod taabto, iyadoo la isticmaalayo kaaliyaha socdaalka ayaa loo sameeyey si fudud oo waxtar leh caddaan doonta sidii ay uga socdaan wadadii saxda ah ka welwelsan tahay.
Beat ee isticmaala macruufka music loo gudbin doonaa inuu u soo dhaqaaqo oo markii ay saxiixdo doonaa, account ay dhan oo ay ku jiraan oo dhan playlists iyo heeso badbaadiyey waxaa loo qaadan doonaa in ka badan oo wareejiyo. Marka guurka uu hirgalo, garaaca ee account of music user waa la joojin doonaa oo kafado la isticmaalin doonta midkood lagu dabaqo Times Apple Music ah ama soo celin by side sida AT & T. Ilaa hadda sida mustaqbalka Beats waa ay ka walwalsan, magaca noolaan doonaa sida 24/7, gudaha music app Apple ee idaacada Beats1.
Sida kor ku xusan, Beats jira macaamiishu Music ayaa loo ogolaan doonaa inuu u dhaqaaqo Apple music app loo marayo geeddi-guurka fudud. Waxaa wanaagsan in la ogaado in dadka isticmaala ma ay tahay inay guul credit kasta oo hore loo bixisay Beats Music ama playlists badbaadiyey iyo heeso. Waxaad dhaqaajin karin ka Beats in Apple oo keliya iPhone, iPad ama iPod Touch la macruufka 8.4 iyo warbixintii ugu danbaysay ee app Music garaaco. Raac talaabada siiyey habka tallaabo inuu u dhaqaaqo Apple music gabayo iyo playlists ka Music Beat app:
Talaabada 1: Tallaabada ugu horreysa waa in la hubiyo in aad saxiixday galay Lugood on qalab aad dhex ID Apple aad.
Talaabada 2: tallaabada xigta waa in la furo app Music Beats ah. Haddii ay dhacdo in aan la saxiixay aad si app this, ka dibna waxaad u baahan tahay inay la soo wareegto ee u soo guuray si Apple.
Talaabada 3: Tubada on bilaabaa marka aad ogaato hadalkaasna fariin in Beats Music hadda waa Music Apple ah. Haddii aadan arki fariin ama badhanka Hel bilaabay, markaas waxaad u baahan doontaa inay hesho on update View si aad u cusbooneysiin karaa in nooca ugu dambeeya ee macruufka.
Talaabada 4: Hadda ka jaftaa xubinnimada shaqsi tan iyo markii aad u guurto karaa qorshaha qoyska oo kaliya ka dib marka aad ku biiri music Apple. Halkan, waxaad awoodi doontaa inaad aragto sida badan Lugood credit dukaanka waxaad heli doontaa marka aad guurto.
Talaabada 5: tallaabada xigta waa in ay galaan sirta ah ID Apple si loo xaqiijiyo xubin aad. Ka dib markii ay sidaas samaynaya, app music furi doonaa oo aad biilasha la sara kicin doonaa si guul leh.
Marka aad ka music Beats dhaqaaqo Apple Music, qaar ka mid ah waxyaabaha aad la dhaqaaqi doono waxaa ka mid ah maktabadda, playlists aad, talooyinka aad, magacaaga user, playlists abuuro by saaxiibadaa oo aad isku qori, playlists abuuray by curators iyo tafatirayaasha iyo curators iyo fannaaniinta aad raacdo, haddii ay diyaar u yihiin inay raacaan on this Apple music app.
Top 50 Background Free Music inay Download
Top 10 Artists Christian.
Sida loo Download Last.fm Music la Last.fm Music Downloader
> Resource > Music > Apple Beats Music